ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် သည် ကုလသမဂ္ဂ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယင်း၏ အသင်းအဖွဲ့သည် နိုင်ငံအနှံ့တွင် လုပ်ကိုင်လျက် ရှိပြီး ပင်မရုံးများမှာ ရန်ကုန်နှင့် နေပြည်တော်တို့တွင်လည်းကောင်း ရုံးခွဲများမှာ ကချင်၊ မန္တလေး၊ ရခိုင်၊ မွန်နှင့် ရှမ်းတို့တွင်လည်းကောင်း အသီးသီး ရှိကြသည်။ ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် ၏ ဌာနေ ကိုယ်စားလှယ်နှင့် လက်ထောက် ဌာနေကိုယ်စားလှယ်တို့က နိုင်ငံတွင်းရှိ အကြီးတန်း ခေါင်းဆောင်မှုကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ကမ္ဘာ့အဆင့် ခေါင်းဆောင်မှုအတွက် ဤတွင် ဖတ်ရှုပါ ။
ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဌာနေ ကိုယ်စားလှယ်
မစ္စတာ တီတွန် မစ်ထရာ သည် ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားတစ်ဉီးဖြစ်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက် အကြီးတန်း ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဉီးအဖြစ် နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကျော် အတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ပါသည်။
မစ္စတာမစ်ထရာသည် ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်၏မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဌာနေကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်တာဝန် မထမ်းဆောင်မီ ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်၏ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဆိုင်ရာ ဌာနေကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် လည်းကောင်း၊ အီရတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့၏ ဖွံ့ဖြိုး ရေးနှင့် လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးရေး ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှုရုံး၏အကြီးအကဲ နှင့် မဟာဗျူဟာ စီမံကိန်း များရေးဆွဲရေးဆိုင်ရာ အကြီးတန်း အကြံပေး အရာရှိ အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ ဘန်ဆာမိုရို ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်၏ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာ အကြီးတန်းအကြံပေး အရာရှိအဖြစ်လည်းကောင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။
မစ္စတာမစ်ထရာသည် ဩစ​တြေးလျနိုင်ငံတွင် အစိုးရအဆင့်မြင့် အရာရှိ တစ်ဦးအဖြစ်တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့စဉ် ဩစ​တြေးလျ အစိုးရ၏ ဖိလစ်ပိုင် နိုင်ငံဆိုင်ရာ အကူအညီပေးရေးအစီအစဉ်၏ အကြီးအကဲနှင့် အကြီးတန်း သံတမန်တစ်ဉီး အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင် ခဲ့သည့်အပြင် ဩစတြေးလျနိုင်ငံနှင့် သီရိလင်္ကာ၊ မော်လဒိုက်၊တရုတ်၊ အင်ဒိုနီး ရှားနှင့် တီမော-လက်စတီ နိုင်ငံအစိုးရများအကြား နိုင်ငံအချင်းချင်းသဘာတူအကောင်အထည်ဖော်သည့် ပမာဏကြီးမားပြီး ခက်ခဲရှုပ်ထွေးသော လူမှု ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် အခြေခံ အဆောက်အအုံဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များကို စီမံခန့်ခွဲရသော AusAid ၏ လက်ထောက်အတွင်းဝန်အဖြစ် လည်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။
မစ္စတာမစ်ထရာသည် CARE International အဖွဲ့၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အရေးပေါ်အကူအညီပေးရေးအစီအစဉ်၏ ညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ် အာဖရိက၊ တောင်အာရှ၊ အရှေ့တောင်အာရှ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့် ပစိဖိတ် ဒေသများတွင် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ တုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်မှုများကို ဉီးဆောင်ခဲ့ပါသည်။
Ms. Dawn Del Rio သည် ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် မြန်မာနိုင်ငံရုံး၏ ဒုတိယဌာနေ ကိုယ်စားလှယ် (၂/၂၀၁၇ - ယခုအချိန်ထိ) ဖြစ်ပါသည်။
Ms. Dawn Del Rio သည် ယခင်က ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် အာဖဂန်နစ္စတန် ရုံးတွင် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် လူသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ယူနစ် ဥက္ကဌ (၉/၂၀၁၄ -၂/၂၀၁၇) အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ထိုမတိုင်မီက နယူးရောခ်နှင့် ဘန်ကောက်တို့ရှိ ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် ၏ မိတ်ဖက်များစွာပါဝင်သည့် Trust Fund ရုံးအတွက် ကမ္ဘာ့အဆင့် ရုံးအဖွဲ့ အကြီးတန်း အရာရှိ (၅/၂၀၀၇ - ၉/၂၀၁၄) အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် သို့ ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ခြင်း မပြုမီ Ms. Del Rio သည် အာရှတိုက်အလယ်ပိုင်းနှင့် တောင်/အရှေ့ပိုင်း အာဖရိကတို့ရှိ များစွာသော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ (INGOs) နှင့် အစိုးရအဖွဲ့များကြား ချိတ်ဆက် လုပ်ကိုင်သည့် အဖွဲ့အစည်းများတို့တွင် လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့် ၂၅ နှစ်တာလုံး သူမ၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ်များတွင် အမေရိကန်နိုင်ငံမှ ပြည်နယ်၊ မြို့နှင့် စီရင်စုဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေး အဆင့်များ၏ ဒေသအစိုးရရာထူးများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်း၊ ပြည်နယ် ဥပဒေပြုရေးနှင့် ဝန်ထမ်းအကြီးအကဲအဖြစ် အစိုးရဝန်ထမ်းများအတွက် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခြင်းတို့ဖြင့် ထိရောက်သော ဒီမိုကရက်တစ် အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းများအား နည်းနာနှင့် အကြံပေးခြင်းဆိုင်ရာ အားပေးကူညီမှုများပေးခြင်းတို့ဖြင့် စူးစိုက်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
Ms. Del Rio သည် အမေရိကန်နိုင်ငံသူ ဖြစ်ပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ Oregon တက္ကသိုလ်မှ ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့ရေးရာ မူဝါဒများအတွက် မာစတာဘွဲ့ ရရှိထားသူ ဖြစ်သည်။